Nhau - Acrylic Mapepa
Zvinoenderana neMRFR ongororo, iyo Global Acrylic Sheets Market inofungidzirwa kunyoresa CAGR inopfuura 5.5% kuti isvike kukosha kwakatenderedza USD 6 Bhirioni na2027.
Acrylic chinhu chakajeka chepurasitiki chine simba rakatanhamara, kuomarara, uye kujekesa kwemaziso. Iyo jira iri nyore kugadzira, zvisungo mushe nemagadzirirwo uye zvinogadziriswa, uye zviri nyore kuita thermoform. Izvo zvinhu zvine akakwirira ekunze mamiriro ekunze achienzaniswa nemamwe akawanda akajeka epurasitiki.
Iyo acrylic sheet inoratidza girazi-senge hunhu senge kujekesa, kupenya, uye kujekesa. Iyo haina kureruka uye ine yakakwira rova ​​kusagadzikana kana ichienzaniswa negirazi. Iyo acrylic sheet inozivikanwa nemazita mazhinji senge acrylic, acrylic girazi, uye plexiglass.
Musika wepasi rose wemashizha emashizha unonyanya kufambiswa nekushandiswa kwawo muchivakwa & indasitiri yekuvaka kune akasiyana mafomu senge mapurojekiti ekuvandudza imba, backsplash yekicheni, windows, partitions yemadziro, uye fenicha yekumba uye yekushongedza, pakati pevamwe. Acrylic machira ndiwo sarudzo yakasarudzika yezvinhu nekuda kwenzvimbo dzakakwirira senge yakanakisa yakajeka kujekesa, ka17 kukanganisa kusagadzikana sekuenzaniswa negirazi, kureruka, tembiricha, uye kuramba kwemakemikari.
Pamusoro peizvi, inoshandiswa zvakanyanya mukushambadzira uye kuumba glazing kugadzira mamiriro ekunze uye mahwindo asingadzivirirwe nedutu, mahwindo mahombe uye ane bara, uye mwenje unogara kwenguva refu.
Vatambi vanoshanda mumusika uyu vano tarisa pane akasiyana masystem matanho sekuwedzera uye kugadzirwa kwechigadzirwa. Semuenzaniso, muna Kubvumbi 2020, yakawedzera kugadzirwa kwemashiripiti eacrylic machira ne300% kutsigira kuumbwa kwemadziro ekudzivirira ehutsanana muUK uye nedzimwe nyika dzeEurope mukupindura kudiwa kuri kukura kwekudzivirira kubva kune COVID-19 denda.
ASTM D4802 inotsanangudza iwo marongero ekugadzirwa kweacrylic machira nemaitiro akasiyana. Nekudaro, iyo acrylic jira mbishi zvigadzirwa zvinosanganisira vinyl acetate kana methyl acrylate, ayo ari ekugadzira michina yakagadzirwa kubva kune polymer (polyacrylonitrile). Iwo mirau pane hutano uye nharaunda njodzi dzezvinhu izvi zvakasvibirira zvinokanganisa kugadzirwa uye kushandiswa kwema acrylic machira.
•Yakawedzeredzwa Acrylic Sheet: Aya mapepa ari pasi pehunhu achienzaniswa neakakandirwa machira eacrylic, asi ane katatu kakasimba kusagadzikana kushomeka kupfuura akawanda akapetwa simba girazi rewindo asi anorema kanenge hafu yakawanda. Ivo vanoshanda nemazvo ekuratidzira makesi, mwenje, kusaina, uye kuomesa, pamwe nezvimwe zvakawanda zvekushandisa. Iwo machira anogona kuve angave akapihwa mavara kana kristaro yakajeka, zvinoenderana nezvinodiwa, uye anozoita yero kana kupera nenguva.
•Kanda Acrylic Sheet: Cast acrylic haina huremu, inokonzeresa-kusagadzikana, uye yakasimba pepa. Inogona kugadzirwa zviri nyore mune chero chimiro chinodiwa, inouya mune akawanda akasiyana mavara, saizi, ukobvu, uye kupedzisa, uye inoshanda nemazvo kune zvese kubva pakuratidzira makesi kusvika kumahwindo. Chikamu chidimbu chakakamurwa kuva sero kukanda acrylic sheet uye inoenderera ichikanda acrylic machira.